Counter strike 1.6 DOWNLOAD Counter Strike 1.6 Download
Counter-strike 1.6 misintona maimaim-poana amin'ity cs 1.6 tranokala misintona
Counter-Strike 1.6 Fampidinana maimaim-poana:
Counter-Strike 1.6 dia iray amin'ireo lalao mihetsika malaza indrindra, mampiala voly ary misintona be dia be eto amin'ny planeta maitso satria feno fitsangatsanganana sy hetsika. Nofinofin'ny tia lalao rehetra ny misintona CS 1.6 afaka amin'ny solosainy manokana ary manomboka ady. Tranonkala sahaza afaka amin'ny karazana rakitra hafa rehetra azo alaina CS 1.6 dia tsy asa mora sy tsotra. Raha tia ny lalao hetsika ianao counter-strike 1.6 ary mitady télécharger maimaim-poana, dia eo amin'ny toerana mety ianao. Tsy mila mandeha etsy sy eroa ianao mitady télécharger gratuit CS 1.6. nomenay anao ny safidy tsara indrindra hisintonana anao CS 1.6 tsy andoavam-bola.
Amin'ity tranokala ity dia azonao atao ny misintona mora foana ny dikan-teny rehetra Counter-strike 1.6 tsy andoavam-bola. Maimaimpoana izany. Mila misintona mivantana ny kinova feno an'ny CS 1.6 amin'ny fipihana ny bokotra fampidinana etsy ambony ary ankafizo ny lalao nefa tsy mandany vola amin'ny fividianana CS 1.6 setup na lalao Multiplayer. Azo inoana fa hahita tranokala maro hafa ianao izay manolotra fampidinana CS 1.6 maimaim-poana, fa ny ankamaroan'izy ireo dia manana fomba sarotra amin'ny fampidinana miaraka amin'ny rakitra junk izay hanimba ny solosainao. Amin'ity pejy ity dia manolotra anao ny dika mitovy amin'ny lalao CS 1.6 tany am-boalohany sy ny fomba tsotra amin'ny fampidinana azy amin'ny PC-nao. Fanampin'izay, tsy misy rakitra sy programa fanampiny izay hisy fiantraikany amin'ny PC na lalaonao satria nesorintsika ny rakitra tsy ilaina ary nahena ny haben'ny CS 1.6 mba hahatonga azy ho tsotra sy mora ho anao. Tsy manome fahafahana misintona fotsiny izahay CS 1.6 maimaim-poana fa manome torolalana sy fampahalalana ho an'ny mpilalao vaovao rehetra na olona vaovao amin'ity lalao ity Counter-strike 1.6. Namorona csdownload.net izahay, pejy web ho anao fotsiny hahafahanao misintona CS 1.6 mora ary mianatra ny fomba misintona ny lalao ao amin'ny PC-nao, ny fomba fametrahana azy, ary ny fomba filalaovana CS 1.6.
Manome anao izahay kinova maimaim-poana sy tsy etona CS 1.6 misintona izay manana hafainganam-pandehan'ny fampidinana faran'izay haingana, famatrarana farany ary algorithm fametrahana. Azonao atao ny misintona sy mametraka CS 1.6 ny dikan-teny sy ny edisiona rehetra miaraka amin'ny fanamorana sy fampandehanana tanteraka ho an'ny dikan-Windows rehetra (XP, 7, 8, 8.1, ary 10) tsy misy bibikely, hadisoana, na fahasosorana lalao amin'ity pejy web ity.
Ahoana ny famaha Counter-Strike 1.6 tsy andoavam-bola?
Raha te-hidina ianao Counter-Strike 1.6 lalao maimaim-poana fa tsy mahay misintona CS 1.6 amin'ny PC-nao dia tsy mila manahy momba izany ianao satria eto izahay hanampy anao. Atolotray anao ny dikan-teny feno amin'ny fampidinana maimaim-poana ny CS 1.6 lalao. Nomenay anao ny rohy fampidinana azo ampiasaina amin'ny CS 1.6 ato amin'ity tranonkala ity hahafahanao misintona azy amin'ny tranokalanay azo antoka. Mba hampidinana entana CS 1.6, mila manaraka dingana vitsivitsy tsotra sy mora fotsiny ianao. Vakio tsara ireto toromarika manaraka ireto mba ho azonao ny dingan'ny fampidinana maimaim-poana CS 1.6
Tsindrio eo amin'ny Counter-Strike 1.6 bokotra download maimaim-poana, izay omena etsy ambony
Safidio avy eo ny toerana ao amin'ny solosainao izay tianao hitahiry maimaimpoana CS 1.6 hametraka
Afaka minitra vitsy vao misintona CS 1.6 avy amin'ny tranokala mankany amin'ny solosainao. Ny hafaingan'ny fampidinana dia miankina amin'ny hafainganam-pandehanao amin'ny Internet.
Rehefa misintona ny CS 1.6 vita ny fisie rakitra, mankanesa any amin'ny lahatahiry izay nandefasanao ny fanamboarana
Tsindrio ny fisie fisie an'ny CS 1.6 ary apetaho amin'ny solosainao.
Rehefa tapitra ny dingana fametrahana dia manindry ny bokotra vita
Nahomby ianao tamin'ny fisintomana CS 1.6 tsy andoavam-bola. Sokafy ary ankafizo ny lalao.
Taloha dia tsy maintsy nandoa vola ny olona mba hisintonana Counter-Strike, saingy maimaim-poana izao ny misintona sy milalao tsy an-kanavaka. Manolotra maimaim-poana izahay CS 1.6 download; afaka misintona mora foana ny dikan-teny rehetra sy ny fanontana amin'ity lalao genre shooter voalohany ity. Raha mitady dikan-teny samihafa ianao ao anatin'izany Counter-Strike 1.6 CSGO Edition, Counter-Strike: Lamaody Halloween, CS 1.6 Version original, CS 1.6: Version PROCS RAR, CS 1.6: Kinova XTCS, Counter-Strike 1.6 Ny maodely maoderina, na dikan-teny na fanontana hafa, dia azonao alaina tsy misy fetra na fahasahiranana hafa avy amin'ity pejin-tranonkala ity. Kitiho fotsiny izay dikan-teny maimaim-poana CS 1.6 bokotra misintona izay tianao alaina maimaim-poana, miaraka amin'ny fiarovana mahery vaika amin'ny script sy rakitra ratsy, eto amin'ity pejy web ity mba hahazoana lalao amin'ny PC-nao.
Rafitra fiasa tsara indrindra alaina CS 1.6 Free:
Ny kinova rehetra an'ny Counter-Strike (CS 1.6 warzone, CS 1.6 original, XTCS final, CS: GO mod, Source edition, sns.) dia azo kajy amin'ny dikan-teny Microsoft rehetra toa ny Window 95, Window 98, Window 2000, Window 7, Window 8, Window 8.1, Window XP, Window 10 sy ny sisa. Raha mampiasa rafitra fiasana hafa ankoatry ny Windows ianao, dia manoro hevitra anao izahay mba hifindra amin'ny Microsoft windows mba hankafizana ny lalao sy hisorohana ny fahadisoana na ny korontana eo am-pilalaovana. Raha efa manana rafitra fiasa Microsoft amin'ny PC-nao ianao dia aza miandry intsony, mandehana any amin'ny bokotra rohy download Counter-Strike 1.6 maimaim-poana amin'ny tranokalanay ary alao maimaim-poana ny CS: 1.6.
Fepetra takiana amin'ny rafitra minimum mba hisintomana sy hilalao maimaim-poana CS 1.6:
Raha hisintona ianao CS 1.6 maimaim-poana amin'ny tranokalanay, tsy maintsy fantatrao momba ny fepetra takiana amin'ny rafitra kely indrindra atolotry ny solosaina hilalao Counter-Strike 1.6 lalao. Azo isaina misintona ve ny rafitry ny solosainao? CS 1.6 lalao sy lalao tsy misy fiatoana na fanelingelenana? Raha tsy fantatrao ny momba izany dia tsy ilaina ny manahy satria maimaim-poana Counter-Strike 1.6 ny fametrahana lalao dia mitaky farafahakeliny ny loharano ao amin'ny solo-sainao. Tsy lalao mavesatra izany fa mila karatra misy sary sy famaritana miavaka amin'ny solosaina. Ny haben'ny rakitra exe an'ny CS 1.6 maka 250 MB amin'ny kapila mafy an'ny solosainao ihany. Izy io dia habe kely ka tsy hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny solosainao sy ny fandrosoanao rehefa misintona maimaim-poana ianao Counter-Strike 1.6 amin'ny PC-nao. Na izany aza, zava-dehibe ny mahafantatra momba ny fepetra kely indrindra amin'ny solosaina alohan'ny hisintonana CS 1.6 tsy andoavam-bola. Raha efa nilalao ianao CS 1.6 amin'ny solosainao tsy misy fiatoana, midika izany fa efa manana farafaharatsiny farafahakeliny takiana amin'ny solosainao ianao ary raha sendra olana amin'ny fampidinana sy filalaovana ianao CS 1.6 tsy maintsy jerenao eto ambany ireo fepetra takiana ilaina mba hahalalanao fa tsy azo sintonina maimaimpoana ny PC-nao CS 1.6 na tsia. Ny voafaritra manokana amin'ny solosaina CS 1.6 dia CPU- 0.8 GHz, Free Hard Disk Drive-650 MB, Random Access Memory (RAM)- 128 MB.
Soso-kevitra voatondro ho an'ny Counter-Strike 1.6
Tsy maintsy manana fifandraisana Internet tsara ianao hisintomana sy hilalao CS 1.6 amin'ny solosainao
Ny solosainao dia tokony hanana RAM 512 MB na mihoatra hankafy ny lalao.
Tsy maintsy manana kapila mafy 750 MB farafahakeliny ao amin'ny Pc ianao
Ny karatra video 128 MB dia tokony ho eo amin'ny solosainao
Tsy maintsy manana Mouse sy Keyboard ianao hilalao CS 1.6, na izany aza, tsy voatery ny mikrô
Mba hanana traikefa tsara amin'ny CS 1.6, tsy maintsy manana ny rafitra fiasan'ny Microsoft Windows ianao.
Maninona ianao no tokony misintona Counter-Strike 1.6 avy amin'ny tranokalanay?
Tamin'ny voalohany nanombohany, CS 1.6 maimaim-poana download dia tsy nisy ho an'ny vahoaka, fa tamin'ny fandehan'ny fotoana developers ny Counter-Strike 1.6 nanomboka namolavola rakitra fananganana lalao maimaim-poana 1.6. Na izany aza, izao dia afaka mahita tranonkala be dia be ianao manolotra fisintomana maimaim-poana CS 1.6 lalao. Asa sarotra ho an'ireo tia lalao CS ny mitady vohikala ahafahany misintona mora foana Counter-Strike 1.6 maimaimpoana nefa tsy misy viriosy manimba, fisie, mamatotra, doka na rakitra hafa tsy ilaina. Mila mahita ny pejin-tranonkala tonga lafatra ianao alaina Counter-Strike 1.6. ny ankamaroan'ny tranokala izay manome maimaim-poana misintona ny Counter-Strike 1.6 dia manana karazana rakitra ivelany izay tsy misy fiantraikany amin'ny fandrosoana sy ny fahombiazan'ny filalaovana CS 1.6 fa koa misy fiatraikany ratsy amin'ny rafitrao noho ny viriosy maloto
Ao amin'ny pejin-tranonkalantsika https://csdownload.net, dia ho hitanao maimaim-poana ny fisie setup 1.6 CS farany indrindra. Nomenay rohy mankany CS 1.6 misintona ho anao, izay tena miaro sy tsy misy rakitra maloto rehetra. ny CS 1.6 Ny mpanjifan'ny tranokalanay dia voaaro amin'ny fomba hack sy viriosy rehetra fantatra amin'ny tranokalanay csdownload.net azonao alaina CS 1.6 miaraka amin'ny fiarovana mahery vaika ny rakitra sy ny script ary ny fampidinana Counter-Strike fitokonana avy amin'ny pejinay dia azonao atao ny misoroka virus.
Ankoatr'izay, azonao atao ihany koa ny maka ny fanontana taloha sy vaovao an'ny Counter-Strike 1.6 avy amin'ity tranonkala ity. Ny fanontana vaovao Counter-Strike 1.6 Kinova XTCS, Counter-Strike 1.6: Dikan-teny voalohany, Counter-Strike 1.6 PROCS Version, CS: GO Edition, sy ny sisa dia azo jerena ao amin'ny tranokalanay. Afaka mahita rohy amin'ity tranokala ity ianao. Raha tena tia anao ianao CS 1.6 alaivo dia inona no andrasanao? Kitiho fotsiny ny bokotra CS misintona maimaim-poana, alaivo ny lalaoo ary mankafy milalao miaraka amin'ny namana sy ny vahiny.
Fantatrao ve hoe nahoana ny CS 1.6 no lalao CS misintona malaza indrindra?
The CS 1.6 dikan- Counter-Strike dia malaza satria manana toetra sy endri-javatra manintona maro izay mahatonga azy ho miavaka sy mahaliana kokoa noho ny dikan-teny taloha Counter-Strike. Ity kinova an'ny Counter-Strike dia novolavolaina manokana ho an'ny besinimaro amin'ny alàlan'ny fiheverana ny tombontsoa sy ny fitakian'ny mpilalao. Counter-Strike manana fomba Multiplayer sy tokana mpilalao. Ny mpamorona dia nampiditra dikan-teny vaovao izay manana ampinga tetika mamiratra, Snipers miaraka amin'ny crosshairs, ary fanavaozana backend maro.
Ny mpilalao dia afaka manana fitaovam-piadiana isan-karazany sy farany ao anatin'izany, antsy, basim-borona, fiadiana amin'ny vatana, grenady, basy masiaka, ary fitaovana fanariana baomba, amin'ny dikan-teny vaovao. CS 1.6. ny mpilalao dia afaka mahazo vola amin'ny filalaovana lalao sy fividianana fitaovam-piadiana araka ny fepetra takian'ny lalao. Ireo fitaovam-piadiana ireo dia mitovy amin'ny tena fitaovam-piadiana ampiasaina amin'ny ady tena izy ka izany no mahatonga ireo fitaovam-piadiana ireo ho mangatsiatsiaka sy manintona ny mpilalao.
Ireo kinova vaovao an'ny Counter-Strike manana sary avo lenta, modely tsara, haingon-trano, ary feo mavitrika. Ny sarintanin'ny CS 1.6 dia novaina be sy nohatsaraina noho ny dikan-teny hafa amin'ny lalao.
Mahaliana fa CS 1.6 tsy mitaky rafitra informatika mavesatra satria tsy lalao mavesatra izay rafitra informatika misy fepetra kely indrindra dia afaka miasa mora foana ny lalao. Ankoatra izany, mifanaraka amin'ny dikan-teny rehetra an'ny Microsoft Windows Versions.
Ankoatry ny, Counter-Strike Nanjary nalaza teo amin'ny olona ihany koa izany satria manampy azy ireo hanadino ny olany amin'ny fiainana andavanandro izany ary mamela azy ireo hiova amin'ny toe-javatra mampiady saina mankany amin'ny fahasamihafan'ny tontolon'ny lalao. Misintona sy milalao CS 1.6 miaraka amin'ny namana sy ny olona tsy fantatra dia manampy amin'ny fanafoanana ny eritreritra ratsy ary manome fahafahana ny olona hampiala voly ny tenany amin'ny fanehoan-kevitra. Ny lalao fandikan-teny avo lenta sy ny chat dia manome fahafahana ny mpilalao hankafy ny endriky ny hetsika angano.
Noho izany, noho ny endri-javatra tsy manam-paharoa sy ny mampiavaka azy mahaliana, nanjary nalaza eran'izao tontolo izao i CS ary tian'ireo olona milalao ity lalao ity amin'ny fotoana malalaka ananany. Izahay eto dia hanampy anao amin'ny fanomezana rohy azo antoka tanteraka hampidina CS 1.6 tsy andoavam-bola.
Amin'ity pejy ity dia azonao atao Download CS 1.6 feno install version. Misy misy Download XTCS Counter-Strike 1.6 version maimaim-poana. XTCS 1.6 Final Release 2011 dia iray amin'ireo kinova farany sy moderina an'ny Counter-Strike 1.6. Ity kinova vaovao ity dia manana modely tsara kokoa, haingon-trano ary feo mavitrika kokoa. Noho ny sary avo lenta dia manana fampisehoana tsara kokoa noho ny dikan-teny teo aloha ny lalao CS 1.6. Ny lalao eto dia natokana ho an'ny rafitra fandidiana iray - Windows. Ny zava-dehibe indrindra dia miasa amin'ny dikan-Windows rehetra.
Counter Strike dia iray amin'ireo lalao tifitra malaza sy malaza indrindra eran-tany. Ny CS dia manana toe-javatra tsara indrindra, sarintany avo lenta ary sary izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo mpitifitra olona voalohany indrindra amin'ny Internet nandritra ny taona lasa. Izany no antony counter-strike tsy misy fampidinana etona mbola ambony ny taha.
Eto ianao dia afaka mahita rohy ahafahana misintona a counter-strike 1,6 fisie fisie. Na izany aza, ity counter strike Ny download ho an'ny pc dia tsy ahitana sarintany, feo, na fametrahana fanampiny hafa.
Tsindrio ny Download cs 1.6 ary manomboka misintona
Rehefa vita ny dingana fametrahana, sokafy ny counter strike rakitra hitsin-dàlana lalao eo amin'ny biraonao ary manomboka milalao cs 1.6
Fanamarihana: Tsy misy programa na rindranasa fanampiny izay alaina sy apetraka ao amin'ny navigateur miaraka amin'ny rakitra fametrahana cs. Ity dia rohy misintona mivantana mivantana tsy misy fampiharana hafa tsy ilaina.
Counter-Strike 1.6 Ny rakitra setup dia voaaro amin'ny fanovana lalao, manana bot's (mpilalao CPU) ho an'ny maody lalao mpilalao tokana, ary navigateur mpizara miasa hitadiavana mpizara lalao. Counter strike misintona windows 10 dia avo lenta cs 1.6 kinova izay midika fa tsy misy glitches na bug.
Fanamarihana: Afaka misintona ianao counter strike 1.6 Download maimaim-poana amin'ny pc. Na izany aza, raha manao izany ianao dia manambara fa manana ny dika mitovy amin'ilay lalao ianao ary ity tsy etona counter strike Download ho an'ny tena manokana ny kopia. Raha tsy izany, fizarana counter strike downloads ho an'ny pc ho an'ny tanjona hafa dia tsy mitombina.
Amin'ity fehintsoratra ity dia hiresaka momba ny tantaran'ny CS aho. Counter strike dia lalao mpitifitra olona voalohany amin'ny Internet izay navoaka voalohany ho toy ny fanovana Half-Life nataon'i Minh "Gooseman" Le sy Jess Cliffe tamin'ny 1999 ary taty aoriana tamin'ny 2000 Counter-Strike navoakan'i Valve teo amin'ny sehatra Microsoft Windows. Vetivety dia lasa iray amin'ireo lalao mpitifitra malaza eran-tany ny lalao.
Iray amin'ireo farany Counter strike kinova, Counter-Strike 1.6, dia fanavaozana votoaty lehibe ho an'ny lalao ary ny laharan'ny dikan-teny dia malaza be ankehitriny ary matetika ampiasaina hanavahana ny lalao tany am-boalohany amin'ny andiany sisa. Eto ianao dia afaka mora foana misintona fanamboarana lalao ho an'ny pc ary apetraho amin'ny solosainao ny lalao.
Amin'izao fotoana izao CS 1.6 angamba no dikan-lalao CS malaza indrindra eran'izao tontolo izao ary ampiasaina matetika amin'ny olona avy amin'ny firenena samihafa. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia mikarakara fifaninanana amin'ity lalao ity ny olona. Hitanao eto https://csdownload.net/cs-1-6-download
Koa satria Counter Strike 1.6 dia iray amin'ireo lalao shooter malaza indrindra eran-tany, misy fanovana maro isan-karazany sy dikan-teny vaovao. Ny sarin'ny lalao, ny bibikely ary ny fivoaran'ny singa hafa dia atao tsy tapaka amin'ireo dikan-teny nohavaozina mba hampitombo ny lazany.
Eto ianao dia afaka misintona ny iray amin'ireo XTCS vaovao indrindra counter-strike 1.6 kinova farany.
Counter strike 1.6 misintona kinova feno misy sarintany tsy tapaka, feo ary maodely dia ampahany tsy milahatra amin'ny lalao. Na izany aza, tsy misy feo na sarintany vao nanampy na novaina tao cs ampidino rakitra fisintomana maimaim-poana. Azonao atao ihany koa ny misintona moded Counter strike dikan-teny avy eto https://csdownload.net/counter-strike-1-6-indir /
Counter-Strike 1.6: XTCS Version Download maimaim-poana:
Counter-Strike 1.6: XTCS, Xtreme Counter-Strike 1.6, no dikan-teny farany sy maoderina an'ny CS 1.6. Ity dia kinova mahavariana an'ny CS 1.6 izay manana sary, feo, fitaovam-piadiana, zavatra, maodely tsara kokoa, ary fanavaozana sarobidy maro hafa.
Raha te hisintona XTCS ianao Counter-strike 1.6 maimaim-poana, tokony tsindrio ilay fampidinana XTCS maimaim-poana CS 1.6 etsy ambony. Ny XTCS maimaim-poana Counter-strike 1.6 Ny fametrahana dia misy ny fanamafisana FPS sy ny kinova fananganana vaovao. Ny fametrahana ny CS 1.6: XTCS avy amin'ny tranokalanay dia miantoka ny traikefa gaming tsara indrindra.
Karakter XTCS Counter-Strike 1.6 Famotsorana farany:
Dual Protocol (48 + 47) mpanjifa
Mifanaraka amin'ny anticheat Injected sXe farany
Ahitana ny farany CS 1.6 bots
Anglisy, Albania, Bulgarian, Czech, Danoa, Alemanina, Holandey, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Norveziana, Poloney, Portiogey, Romanian, Rosiana, Espaniola, Suède, Tiorka.
Nanova ny maodely sy ny volon'ireo tanana
Modely mpilalao novaina
Raikitra taloha ary tafiditra ao anatin'ireo feo vaovao azo apetraka amin'ny installer
Nanamboatra karazana bibikely rehetra tao amin'ny milina lalao
Na dia ny sary tena zava-misy aza dia ampahany amin'ny lalao
Anisan'izany ny fitaovana anti-slowhack
Azo lalaovina amin'ny Internet sy LAN
Volo madio 100% avy amin'ny Steam GCF (rakitra cache amin'ny lalao)
Safidy nampiana handefasana mpizara mihaino amin'ny maody LAN
Niampy bebe kokoa Counter-Strike 1.6 sari-
Tetikasa fizika nohavaozina tanteraka
Navoaka maimaim-poana Counter-strike 1.6 Faritra ady:
Counter-strike 1.6: Warzone dia navoaka voalohany tamin'ny 18 Novambra 2013 nataon'i Valve, tompon'ny Counter-Strike franchise, izay tsy mitovy amin'ny kinova hafa an'ny Counter-Strike 1.6. CS: warzone dia manana ny hevitry ny CS 1.6 fa miaraka amin'ny fanapahan-kevitra sy sary avo kokoa. Ovaina kely izy io miaraka amin'ny fanovana miaramila fanampiny. Hatramin'ny namoahana azy dia nankafizin'ny olona ny milalao tifitra CS 1.6 Warzone. ny Counter-Strike 1.6 Warzone dia azo sintonina avy amin'ny tranokalanay csdownload.net amin'ny alàlan'ny rohy nomena eo amin'ilay pejy. Amin'ny fipihana ny fisintomana maimaim-poana CS 1.6 bokotra warzone ambonin'ilay Warzone maimaim-poana CS 1.6 rakitra exe dia ho sintonina amin'ny PC-nao. Rehefa vita ny fisintomana maimaim-poana Warzone CS 1.6 afaka mametraka azy mora foana ianao nefa tsy manana hadisoana na olana. Ny rohy nomena ny CS 1.6 Ny Warzone free dia miasa tanteraka ary azo antoka izay hiaro anao amin'ny viriosy tsy mahazatra, doka, fanesoana lalao ary fampiharana famafana hafa.
endri-javatra ny CS 1.6:warzone:
Azo lalaovina amin'ny Internet, LAN ary miaraka amin'ny bot;
Miara miasa windows 7, 8, 10, XP, vista;
Afaka mampifandray mpizara P47 P48 ihany koa ny mpanjifa.
Fanapahana habe 177 MB.
100% fisie cache cache lalao.
Dual Protocol (48 + 47) mpizara koa tafiditra ao
Patch non-Steam version 44 misy ORANGE BOX;
Fiarovana amin'ny karazana fanapahana rehetra;
Engine kinova (1.1.2.6 hanorina 4554);
Ampio ny farany cs 1.6 bots;
Mampiditra ny farany AMX Mod X v1.8.2.
Download Counter-Strike 1.6 CS: GO mod Maimaim-poana:
Counter-Strike 1.6 CS: GO mod dia endrika novaina an'ny CS 1.6 lalao izay CS 1.6 afaka miaina ny mpilalao Counter-Strike: Lalao Offensive Global. Ity fomba manokana ity dia saika mitovy amin'ny CS: GO ary miasa miaraka Counter Strike 1.6. Izy io dia novolavolaina tamin'ny modely, sarintany, feo, hoditra, fanimbana, ary endrika hafa mitovy amin'ny lalao lehibe Counter-Strike: MANDEHA hanolotra ny traikefa an-tsary tsara indrindra amin'ny solosaina rehetra misy famaritana ambany. Nisy fanovana kely ihany tao CS 1.6 CS: GO izay sarotra ny mahita sy manombatombana.
Free Counter-Strike 1.6 CS: GO dia azo alaina eto amin'ny pejinay ho anao. Azo alaina amin'ny alàlan'ny rohy mivantana omena amin'ity pejy ity. Araka ny hitanao ny Download Counter-Strike 1.6 CS: bokotra GO amin'ny tranokalanay, tsindrio fotsiny eo dia afaho maimaim-poana ny lalao anio.
Download Counter-Strike 1.6 Fepetran'ny rafitra CSGO Minimum:
Fahatsiarovana Ram 512MB
CPU iray misy 1 Core
Memory Memory 64MB
2GB kapila fitehirizana
Counter-Strike 1.6 Endri-javatra lalao CSGO:
Ity Mod ity dia misy fanovana CS 1.6 modely mitovy amin'ny CS: GO
Ity mod voaova ity dia misy feo mitovy amin'ny dikan-teny Global Offensive amin'ny lalao. Radio, Feon'ny fitaovam-piadiana, effet-feo (feon'ny sarintany, sns.)
CS: mozika GO mandeha am-piandohana
Ity fanontana ity dia misy sari-tany nasiam-panitsiana sy novolavolaina toa ny CS: GO, ary izay amin'ny ankapobeny dia ny sari-tany misy anao (de_dust2, de_inferno, cs_assault, sns…)
Ny tontolon'ny lalao dia niova ihany koa ary mitovy amin'ny CS: GO version
CS: menio fiantsenana basy sy bala
Fikarohana mpizara mavitrika
Miasa amin'ny OS rehetra
Habe 400 MB.
Counter-strike dia iray amin'ireo kilalao fitifirana olona voalohany malaza indrindra teo amin'ny tantara. Manana tantara lava be sy mahaliana ary miavaka izy io. Angamba ny ankamaroanareo dia tsy mahafantatra ny tantaran'ny Counter-strike, iray amin'ireo lalao video tena nilalao indrindra hatramin'izay. Amin'ny maha mpilalao azy dia tsy maintsy mahafantatra momba ny fivoaran'ny Counter-strike avy amin'ny hatsaram-panahin'ny mpilalao tokana tonga lafatra dia nivadika haingana ho iray amin'ireo lalao video malaza indrindra, alaina betsaka ary be mpitia indrindra hatramin'izay. Fahamarinana mazava tsara fa naka dikan-teny beta 17 izy io Counter-strike ho velona amin'ny maha-fikambanana tsy miankina amin'ny tontolon'ny lalao. Na eo aza ny lalao taloha, ny mpilalao matihanina ary koa ny olona an-tapitrisany maro mbola milalao, ary mankafy Counter-strike.
Tamin'ny taona 1999, 21 taona lasa lasa izay, ny fiaraha-miasa Valve dia namolavola ny lalao voalohany, lalao shooter olona voalohany antsoina hoe Half-Life. Valve Corporation dia mpisava lalana an'ny Counter-Strike. Orinasa amerikana izy io izay mpamoaka sy mpamorona lalao informatika. Ny Sierra Studios dia namoaka ny antsasaky ny fiainana miaraka amin'ny banga, banga ary mpilalao avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia tia ny lalao. Counter-strike vetivety dia nanjary nalaza be teo amin'ireo mpilalao hany ka nisy vondrom-piarahamonina iray manontolo novolavolaina nanodidina azy, ary nanomboka nanao mods ho an'ny tsirairay ny mpandahatra fandaharana.
Ireo programmer kanadianina Minh Le sy ny namany Jess Cliffe, dia namorona kinova beta an'ny Half-Life mod, Counter-Strike. Nandany iray volana sy tapany nanaovana kaody izy ireo vao namolavola dikan-teny beta voalohany an'ny Half-Life.
Nanohy ny tolona nataon'i Min Le sy Jess Cliffe hampivelatra ny betas ary koa namorona tranokala ho an'ny CS. Tamin'ny voalohany dia tsy nisy afa-tsy sarintany efatra sy fitaovam-piadiana sivy Counter-Strike, na izany aza, ny toerana malaza dia mbola teo. Ny olona taloha dia nilalao 5v5 dia nisafidy ny ho Counter-terrorist na ny mpampihorohoro, ary na izany aza, ireo ekipa roa ireo no ampiasaina ankehitriny. Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana, Counter-Strike nahasarika kokoa ny sain'ny olona ary lasa tia ny lalao ny olona.
Noho ny fitomboan'ny lazan'ny Counter-Strike ary rehefa afaka roa taona mody namboarina ho an'ny fiaraha-monina dia nahasarika ny mason'izy ireo ny mpikaroka lalao Valve ary nanakarama an'i Le sy Cliffe taorian'ny famoahana ny beta fahadimy tamin'ny 2000. Nahazo Valve Counter-Strike ary nanomboka niara-niasa tamin'i Valve ireo programmer Minh Le sy Jess Cliffe. Counter-Strike dia navoaka tamin'ny PC tamin'ny Septambra 2000 ihany, ka nahatonga azy io ho fanombohana ofisialy ny Counter-Strike andian-dahatsoratra.
Ny famoahana ofisialy voalohany ny Counter-Strike nanana sarintany malaza roa lehibe, Assault ( cs_assault) sy Cobblestone (de_cabble) ary tany an-tanety ihany no nilalao azy. Amin'ny maha-mody azy dia nanana mpanaraka be izy saingy taorian'ny famoahana andian-dahatsoratra ofisialy counter strike ho an'ny PC dia nampitombo ny lazany amin'ny vala maro eo amin'ny vahoaka.
Ny fiarahamonina Counter-Strike nanjary nihalehibe sy nihalehibe satria nihamaro ny olona nanomboka nilalao ilay lalao. Ny fiakaran'ny laza dia niavaka satria nilalao eran'izao tontolo izao. Multiplayer efa nisy teo aloha, fa Counter-Strike zavatra hafa ary mora ny miditra amin'ny lalao. Tsy ilaina ny nandany ora maromaro teo anoloan'ny ordinatera mba hilalao lalao miaraka amin'ny namana na olon-tsy fantatra. Afaka nilalao minitra na andro vitsivitsy ny olona araka ny fotoana misy. Lalao tsy manam-paharoa sy mora nilalao nefa sarotra ny ho mahay. Noho ny fomba tsy manam-paharoa sy ny toetra sarotra, dia lasa malaza eo amin'ny mpilalao. Izy io dia lalao video nataon'ny olona ho an'ny pro. Heverina ho iray amin'ireo lalao Multiplayer manan-danja indrindra noforonina hatramin'izay. Ao amin'ny tontolo ankehitriny, dia afaka mahita be dia be ny mekanika Counter-Strike nampihatra na farafaharatsiny nanampy tamin'ny fizarana tamin'ny alàlan'ny lazany.
Ny fisondrotan'ny CS tsy mbola nisy toy izany sy ny fahafahany hisarihana ny olona dia nitarika ny mpamorona hanao bebe kokoa mba hahatonga ity lalao ity ho mahaliana sy manintona kokoa ny olona. Lasa hevitra ny fanirian'ny olona, ​​ary nanova ny hevitra ho zava-misy ny mpandrindra. Ny orinasa Valve dia nampiditra ny rafitra Anti-Cheat (VAC) tamin'ny taona 2002. Ity rafitra ity dia mahatonga azy ho tsy azo atao ny mamitaka na mijirika, ary raha manandrana manao izany ny mpilalao iray dia hahazo fandrarana avy hatrany. Nampiditra sarintany sy fitaovam-piadiana vaovao ho an'ny mpampihorohoro sy mpanohitra ny mpampihorohoro i Valve Counter-Strike kinova 1.1 tamin'ny 2003.
Valve, Ritual Entertainment, ary Turtle Rock Studios novolavolaina Counter-Strike: Condition Zero tamin'ny 2004 ary navoaka hohenoina miaraka amin'i Sierra. Izy io dia manana ny endri-javatra amin'ny fomba tokana mpilalao sy Multiplayer. Nanaraka ny Fanentanana iraka tokana antsoina hoe “The Scenes voafafa” ireo mpandrindra fandaharana. Manatsara ny sary ihany koa izy ireo, na izany aza, tsy nahomby izany. Ny ankamaroan'ny mpilalao dia tsy nahita azy ho mendrika ary tsy liana amin'ny fifindrana amin'ny vaovao Counter-Strike kinova. Tsy afa-po tamin'ny lalao vaovao izy ireo ary aleony taloha Counter-Strike over Counter-Strike: Condition Zero. Rehefa nandeha ny fotoana dia nampiditra vaovao ny Valve Counter-Strike toy ny Counter-Strike: Loharano ary Counter-Strike: Fanafihana manerantany amin'ny 2010
Taorian'ny famerenana matetika sy fanavaozana an'arivony dia nanampy tamin'ny famadihana ny lalao ho lasa ankehitriny ny valve. Niasa foana izy ireo Counter-Strike araka ny fanirian'ny mpankafy sy ny vondrom-piarahamonina izay mahatonga ny CS tsy ny lalao video tsara indrindra hatramin'izay fa nanome azy ny lalao ankafizin'izao tontolo izao maharitra. Iraika amby roapolo taona taorian'ny niandohany Counter-Strike, mbola velona izy io ary olona an-tapitrisany eran-tany no mbola tia milalao CS. Amin'ny lafiny rehetra, lalao tonga lafatra izy io satria manana fifandanjana tonga lafatra amin'ny maha-mpampiasa sy ny fifaninanana. Counter-strike dia mora ny mianatra ny lalao, fa sarotra ny hifehy. Holalaovina hatramin’ny taranaka fara mandimby.